Beesha Caalamka oo indhaha ku haysa madaxda Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Beesha Caalamka oo indhaha ku haysa madaxda Soomaaliya
Waxay Dowladda Dhexe iyo Maamulada ku heshiiyeen Todobaadkii hore inay doorashadda kusoo gabagabeeyaan mudo 40 maalmood gudahooda ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Beesha Caalamka ayaa si dhaw ula socota jadwalkii ugu dambeeyay doorashadda Soomaaliya, oo Maanta ka billaabanaysa 40-ka maalmood ee ay qabsadeen Madaxda dalka, gaar ahaan Rooble iyo hogaamiyeyaasha Maamuladda oo shirkii Gollaha Wadatashiga Qaran ee socday 3-dii illaa 9-kii bishan kasoo saarey habraacyo cusub.
Mareykanka ayaa ku hanjabey inuu tallaabo ka qaadi doono hogaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, hadii aysan doorashadda ku qaban jadwalka cusub, iyadoo dhanka kale looga digay Farmaajo inuu carqaladeeyo, taasoo ka dhalan karta in xayiraado dhanka safarka iyo dhaqaalaha lagu soo rogo.
Waxaa la joogaa waqtigii dhammaan madaxda Soomaaliyeed ay diiradda saari lahaayeen in si degdeg ah loo dhaqan geliyo go’aannada lagu heshiiyey si hab doorasho oo lagu kalsoonaan karo loo soo gabagabeeyo 25ka Febraayo,' ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Beesha Caalamka.
Maamulada ayaa qaarkood hadda shaaciyay kuraas kamid ah Gollaha Shacabka oo doorashadooda qaban doonaan bishan, waxaana caqabado ugu weyn tahay in si goos-goos ah usoo saaraan kuraasta, oo aysan xiriir ahayn doorashadda. Wada-tashiga Beelaha iyo xalinta tabashooyinka ayaa qaata waqti badan.
Waxay maamulada ku qaadatay doorashadda 24 xildhibaan 55 maalmood sanadkii tagey, iyadoo dad badan sheegayaan in aan suurta-gal noqon doonin in kuraasta harsan oo 241 gaaraya 40 maalin lagu soo doorto. Waxaa jira khilaafyo taagnaa mudo sanado ah, oo ku saabsan doorashadda lagu qabanayo Hiiraan iyo Gedo.
Illaa hadda waxaa la doortay 34 Xildhibaan, oo kamid ah 257ta kursi ee Gollaha Shacabka, waxaana degaan doorashooyinka qaar ay yihiin kuwa aan diyaarsanayn, sida Garbahaarey [Jubbaland] iyo Beledweyne [HirShabeelle], oo beelaha degan ay kasoo horjeedaan Axmed Madoobe iyo Cali Guudlaawe. Mudada waxay ku egtahay 25-ka Feb.
Amniga ayaa sidoo kale ah mid aan isku duba-ridnayn, oo aad loo dayacay, iyadoo weerarada Al-Shabaab soo kordhayaan, taasoo qalqal gelinaysa goobaha lagu qabanayo doorashadda.